Banky sary maimaimpoana: ny safidy tsara indrindra ho an'ny tetikasanao | Famoronana an-tserasera
Rehefa mamoaka lahatsoratra isika, na rehefa te hampiseho ny lahatsoratray amin'ny tambajotra sosialy dia matetika mandeha any amin'ny motera fikarohana mitady sary. Na izany aza, maro amin'izy ireo no manana zon'ny mpamorona, na inona no itovizany, manana zon'ny mpamorona izay voahitsakitsaka amin'ny alàlan'ny fampiasana azy ireo tsy nahazoana alalana. Izany no antony banky sary maimaimpoana.
Fa inona ny atao hoe banky sary maimaimpoana? Nahoana izy ireo no tokony hampiasaina? Inona avy ireo tombony sy fatiantoka ananany? Raha tianao hamaly an'ireo fanontaniana rehetra ireo izahay, ankoatra ny fanomezana anao ny lisitry ny banky sary maimaimpoana haka sary ny karazana lohahevitra rehetra, dia ho hitanao eto ambany daholo ny zava-drehetra.
1 Inona no atao hoe banky sary
2 Ahoana ny fomba fiasan'ny banky sary
3 Banky sary malalaka
3.1 Pixabay, iray amin'ireo banky sary maimaim-poana
3.2 Freepik, banky sary vector momba ny zava-drehetra
3.6 Fiainan'i Pix
Inona no atao hoe banky sary
Ny banky sary dia pejy web. Ao anatin'izany no hahitanao sary an'arivony maro izay sokajina amin'ny sokajy, tag sns. ary afaka mahita sary mifandraika amin'ny lohahevitra mahaliana anao.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka a lahatahiry misy ny sarin'ireo sokajy tena samy hafa, na amin'ny sary na amin'ny sary, na sary, na volo, sns.
Afaka mahita karazana banky sary roa ianao: ny maimaim-poana, ahafahanao misintona ireo sary tsy mila mandoa na inona na inona (indraindray ny hany zavatra angatahin'izy ireo aminao dia ny manonona ny mpanoratra ny sary); sy ireo karama, izay tsy maintsy andoavanao ireo saripika ireo ary manana kalitao sy vahaolana tsara kokoa (indraindray).
Ahoana ny fomba fiasan'ny banky sary
Amin'ny Internet dia afaka mahita banky sary maro samihafa ianao, na maimaim-poana izany, na karama. Ary ao anatin'ny roa tonta dia hisy ny sasany manana ny mampiavaka azy: mangataka anao hisoratra anarana izy ireo, manome anao tombony bebe kokoa, kely kokoa ny sarany, manana katalaogy lehibe kokoa izy ireo…).
Amin'ny ankapobeny, ny banky sary rehetra dia miasa amin'ny fomba mitovy:
Manana motera fikarohana izy ireo, izay, mametraka teny, na maromaro, dia hanome anao sary izay manakaiky ny lohahevitra nangatahinao.
Mila mizaha ireo valiny ireo ianao mandra-pahitanao ny sary izay tianao indrindra ary miditra ao. Manaraka izany, ny banky sary dia hanome anao fahitana lehibe kokoa momba ny sary, ary koa ny habe samihafa ahafahanao misintona azy (na mividy azy). Saingy hampahafantatra anao ny mpanoratra ihany koa izy io, raha te hahita bebe kokoa momba an'io olona io ianao, na koa raha mila manome ny laza amam-panahin'ny mpanoratra ianao na azonao ampiasaina ho an'ny tena manokana sy ara-barotra tsy misy olana.
Vantany vao misintona azy ianao, afaka segondra dia azonao io, na eo aza no mety tsy hitovizany indrindra: hisy tranokala mangataka anao hanamarina fa tsy robot ianao, mangataka anao hisoratra anarana ary manontany anao mihitsy aza handoavana ny sary.
Tsy ny banky sary rehetra no manana sary mitovy, fa na dia maro aza no hitovy, misy koa ireo hafa izay mety ho manokana. Izany no antony tsy mety ny mampiasa iray fotsiny, fa maromaro ny hanana safidy bebe kokoa. Indrindra fa misy ny sasany izay voafaritra kokoa amin'ny sokajy sasany.
Fantatray fa ny zava-dehibe ho anao dia ny fahalalana ny banky sary maimaimpoana, etsy ambany dia hatolotray anao ireo maromaro heverina ho tsara indrindra, na noho ny sary marobe ananany, noho ny famahana sy ny kalitaony na noho ny karazana sary.
Pixabay, iray amin'ireo banky sary maimaim-poana
Pixabay dia iray amin'ireo banky sary maimaim-poana malaza eto amin'izao tontolo izao, nanomboka ny tranokalanao dia azo apetraka amin'ny fiteny samihafa (ary mihetsika toy izany ny mpitady). Ao no ahitanao ny sary, sary, vektor ...
Raha hanome anao valiny ianao dia azonao apetraka amin'ny sary farany teo, ny safidin'ny mpanonta (izy ireo no alaina indrindra na manana "tiana", malaza ary sns). Raha misoratra anarana ianao dia tsy mangataka fanamafisana amin'ny robot anao isaky ny misintona sary ianao.
Freepik, banky sary vector momba ny zava-drehetra
Nanomboka 100% maimaim-poana ity tranonkala ity. Izao dia efa nandoa sary tamin'ny hafa ianao. Noho izany dia tokony hojerenao ny karazana sary tianao (mazàna raha manana satro-boninahitra izy io dia sarany izany).
Miorina izy io bebe kokoa amin'ny sary sy sary fa tsy amin'ny sary, na dia afaka mahita ny sasany amin'ity karazana ity aza ianao. Ny lesoka hafa ananany dia ny, matetika, somary misafotofoto ihany izy io rehefa misintona. Ary raha manampy an'izany izahay indraindray dia manokatra doka ho anao izy io, dia mahasosotra izany. Fa amin'ny lafiny kalitao no tsara indrindra.
Ity banky sary maimaimpoana ity dia tsy dia fantatra loatra toy ireo teo aloha, fa ny tena marina dia tena tsara. Mety ny fomba tena mitovy amin'ny pixel. Izany hoe apetrakao ao amin'ny motera fikarohana izay tadiavinao ary omeny anao ny lisitry ny sary mifanaraka amin'izany takiana izany.
Avy eo dia mila miditra amin'ilay pejin-tsary fotsiny ianao ary misintona azy.
Mila mitandrina ianao amin'ity tranonkala ity, tsy hoe ratsy, fa satria misy fizarana roa: maimaimpoana sy karama. Amin'ny Espaniôla izy io ary manampy amin'ny fanavahana ny sary sasany amin'ny hafa, na dia eo aza ny fanomezana anao ny safidinao fandoavam-bola (izay natao tsara kokoa indraindray ary manakaiky kokoa izay tadiavinao) dia mahasosotra anao amin'ny fikarohana sary maimaimpoana.
Amin'ny teny anglisy ity fitaovana ity, saingy mora ampiasaina. Ankehitriny, hikarohana sary dia anoloranay izany ampiasao ireo teny anglisy satria hahazo valiny tsara kokoa ianao (raha tsy izany rehetra izany).
Mampiavaka azy ny fananana sary avy amin'ny sokajy tena samihafa, ary maro amin'izy ireo no azy manokana, izany hoe tsy ho hitanao any amin'ny toeran-kafa rehetra izy ireo.
Ity dia iray amin'ireo banky sary maimaimpoana izay mifantoka indrindra amin'ny sary natoraly sy ny tontolo izy io. Ny sary rehetra anananao dia manana fahazoan-dàlana CCO, izany hoe, natao ho an'ny besinimaro, izay ahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny asa manokana na ara-barotra.
Isan-kerinandro dia manampy sary vaovao izy ireo ary manana kalitao tsy mampino ihany koa. Na dia mifantoka amin'ireo sokajy efa noresahintsika ireo aza izany, raha ny tena izy dia hahita sary hafa ihany koa ianao.
Ao anatin'izany ianao dia afaka mahita sary maimaimpoana tena avo lenta. Amin'ny teny anglisy ary manana sokajy maromaro ianao, manomboka amin'ny biby, olona, ​​natiora, orinasa, sns.
Maro amin'ireo sary ireo no tsy hita any amin'ny banky sary hafa ary ny tombony ananany dia haingana be ny misintona foana amin'ny famahana farany avoakany.
Araka ny hitanao dia misy banky sary maimaimpoana maro, ary maro hafa izay tsy noresahinay. Ny zavatra tsara indrindra dia ny famerenanao hevitra maro hahitanao hoe iza amin'izy ireo no manakaiky kokoa ny mason'ny fahitana tadiavinao amin'ireo tetikasanao (ary manana safidy maro azo isafidianana).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Banky sary malalaka